कहिले निको होला बारेकोटको घाउ ?
शुक्रवार, कार्तिक १४, २०७७
मंगलवार, भदौ १६, २०७७ विकास नेपाल
जाजरकोट । चौतर्फी हिमालको पर्खाल तलसम्म परेका साना फाँट र फाँटको किनारमा हिउँ पग्लिएर बगेको नलगाड नदी । साँच्चिकै सुन्दर ठाउँ हो बारेकोट पूर्वमा डोल्पा, उत्तरमा जुम्ला र पश्चिममा रुकुम पश्चिम रहेको बारेकोट जैविक विविधता र कैयौँ औषधीय मूल्य भएका जडीबुटीको पनि भण्डार नै हो ।
पुस्तौँसम्म कमाएको जमिन र आफू बसेको घरबास एकाएक ढलेपछि सबै उमेर समूहका मानिस अग्ला डाडा र जङ्गलमा त्रिपालको सहारामा दुःखका दिन काटिरहेका छन् । बारेकोट गाउँपालिका–५ का जनकबहादुर शाही भने, “हामीले मनाउने देवी (बाँचिलो) रिसाएर हामीमाथि यतिठूलो बज्रपात भयो कि रु हामीले प्रकृतिमाथि अन्याय गरेका कारण हामीलाई पनि प्रकृतिले नै यो दण्ड दिएको त होइन ”
त्यस पहिरोमा परी एक हजार २०० भन्दा बढी घर भत्किएका छन् । रु १२ करोडभन्दा बढीको धनजनको क्षति भएको छ । तीर्थव्रतको लागि ठाकुरज्यू जाने बाटोदेखि एक गाउँबाट अर्को गाउँ जाने बाटो भत्किँदा धन्नधन्न बाँचेको ज्यान फेरि पनि मरिन्छ कि भनी मन चसक्क गर्दै पानी, घट्ट र भत्किएका घर हेर्न जानुपरेको बारेकोट–४ का अने सार्कीले बताए ।
बढीले एक हजारभन्दा बढी घरपरिवार खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन् । अहिले उनीहरु खुला भल पानी पिउन बाध्य भएको अर्का स्थानीय परिमल कार्कीले पीडा पोखे।
असार २५ भन्दा अघि घरमा बसेर रमाएका छोराछोरी अहिले त्रिपालको बासमा विभिन्न किराले टोक्दा रुँदै कराउँदै बाबाआमालाई गुनासो गर्छन् । तर बाबा आमासँग पनि समाधान के नै छ र रु
उनीहरु घर सम्झँदै फेरि छोराछोरीसँगै बरर आँशु झार्छन् । अहिले बारेकोट गाउँपालिकाभित्रका एक हजार २०० भन्दा बढी सर्वसाधारणको खास व्यथा हो यो । अभिभावकले कति दिन बालबालिकालाई भोलि घर जाउँला भनी ढाँट्ने रु लालाबालाका प्रश्नले आफूहरु हैरान भएको तलकोटका भीमबहादुर सिंहले भन्नुभयो ।
सानो त्रिपालमा एक हजार २०० भन्दा बढी घरपरिवार बस्नुपरेको उहाँको पीडा छ । “खाना पकाउने, खाने र सुत्ने ठाउँभन्दा शौचालय धेरै टाढा छैन । जङ्गलमा जथाभावी दिशा गर्दा फोहोर बढेको छ । न गतिलो बास, न त गतिलो खाना । कति दिन चल्ला यसरी रु” अर्का स्थानीय प्रेम सिंहले पीडा सुनाउनुभयो ।
बाढी र पहिरोले पानीका मुहानसँगै पाइप लाइपलाइन बगाउँदा बारेकोटवासी वर्षाको भल भएर बगेको फोहोर पानी पिउन बाध्य भएका छन् । “भलको पानी नखाए के खानु रु पानी ल्याउने माध्यम केही छैन । न त पानी शुद्ध गर्ने केही औषधि पुगेको छ न अर्को कुनै विकल्प नै छ”, बारेकोट गाउँपालिका–५ कालाखोलीका हिमाल विकले बताउनुभयो । “माननीयज्यू आएर तत्काल खानेपानीको व्यवस्था हुन्छ भनेर जानुभएको हो, महिना दिन बितिसक्दा पनि केही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन” उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “त्रिपालको बास छ, मनभरि पीडा छ । जहाँ हेरेपनि मन बुझाउने ठाउँ भेटिँदैन”, विकले भन्नुभयो । दुई हजारभन्दा बढी घरपरिवार शुद्ध पानीबाट वञ्चित भएको स्वास्थ्य तथा सरसरफाइ शाखा बारेकोट गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
नयाँ बाली पाकेको छैन । गाउँमा किनेर खाने अन्न पाइँदैन । अहिलेसम्म सरकारले राहत दिएको छैन, के आएर बाँच्ने रु यीनै हुन् स्थानीयका गुनासोहरु । बारेकोट– ४ कि पार्वती सार्कीले भन्नुभयो, “हामी साह्रै समस्यामा छौँ, पहिरोलेभन्दा भोकले मरिएला जस्तो छ ।’’ पहिरोको त्रासले घर छोडेर त्रिपालमा बसेको महिना दिनभन्दा बढी भइसक्यो त्यति बेलादेखि नै पेटभर खान पाइएको छैन, उहाँले पीडा पोख्दै भन्नुभयो, “केटाकेटी भोक लाग्यो भन्छन्, के खुवाउँ रु घरमा खानेकुरा केही छैन ।”
“पेट भर्न त पाएका छैनन् पोषणयुक्त खानाको के कुरा” स्वास्थ्यकर्मी कल्पना रोकायले भन्नुभयो, “घरको बालीनाली बाढीपहिरोले छियाछिया पारेको छ । आयस्रोत छैन । पर्याप्त मात्रमा खानेकुरा पनि छैन । यहाँ न फलफूल पाइन्छ, न तरकारी र दही दूध नै । जसका कारण धेरै बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिला कुपोषणको शिकार हुने खतरा बढेको छ ।”
प्रकाशित मिति: मंगलवार, भदौ १६, २०७७, ०१:१६:३१
विद्युत् कार्यालयद्वारा सेवा पुनःसञ्चालन
बिहिवार, कार्तिक ६, २०७७ कर्णालीखबर
गर्भवती हत्या आरोपित पक्राउ
बुधवार, कार्तिक ५, २०७७ कर्णालीखबर
चन्द समूहका कार्यालय सचिव पक्राउ बिहिवार, कार्तिक १३, २०७७
विद्यालयलाई बैंकको बिनाधितो कर्जा
१ प्रम रोजगार कार्यक्रममा जुम्लाका १५ हजार सूचीकृत
२ चन्द समूहका कार्यालय सचिव पक्राउ
३ विद्युत् कार्यालयद्वारा सेवा पुनःसञ्चालन
४ ताँजाकोट गाउँपालिकाका नाका बन्द
जुम्लाका सीडीओ थापालाई यसरी लाग्यो कोरोना बिहिवार, पुष १७, २०२६
सन्दीपको बलिङ बरियता किन खस्कियो ? बिहिवार, पुष १७, २०२६
टी-ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खला इंग्ल्याण्डले जित्यो बिहिवार, पुष १७, २०२६
अनुष्का गर्भवती, बाबु बन्दै विराट कोहली बिहिवार, पुष १७, २०२६
© Karnaali Khabar -2020 All rights reserved.